Mpempe ọkụ eletrik bụ ngwaọrụ eji arụ ọrụ iji dọpụta (ifufe) ma ọ bụ pụọ (ifufe pụọ) ma ọ bụ dozie "esemokwu" nke eriri ma ọ bụ eriri waya (nke a na -akpọkwa "eriri" ma ọ bụ "eriri waya"). Winch eletriki anyị bụ ihe ga-enwerịrị maka ngwa mgbake yana ọ dị mfe iji. Karịsịa kachasị maka iji mgbake. Na -agụnye ihe niile ịchọrọ maka nhazi na ịrụ ọrụ.
☆ 12/24V volt usoro ọnya moto maka ike na ọsọ ahịrị ngwa ngwa
Design Nhazi profaịlụ dị ala ga-adabara suv, offroad, jeep na ndị ọzọ
Na-adigide, dị larịị, na ntụkwasị obi nke usoro mbara ala atọ
☆ Nkwụsị nkwụsị njigide akpaka maka nchekwa
C Ihe njigide na -enye gị ohere iji aka hapụ ụdọ winch
☆ Ụdọ waya ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ eriri sịntetik bụ nhọrọ
Mgbanwe dị n'ime ime + njikwa ikuku ikuku
Anyị nwere ule 100% na ike na arụ ọrụ winch
☆ CE na GS Compliance etinyere yana nnwale nchekwa ka akwadoro
☆ Ngwa ahịa anyị dị mma nke ọma, mara mma ma dịkwa mfe ịwụnye
1. Jiri nlezianya gụọ akwụkwọ ntuziaka tupu ịrụ ọrụ! Debe nsụhọ nchekwa oge niile.
2. Debe aka na ahụ gị na fairlead (oghere oriri eriri) mgbe ị na -arụ ọrụ.
3. Ejila winch eme ihe dị ka ndọkpụ, ejikwala maka njem ndị mmadụ.
4. Arụkwala ọrụ ma gbasaa n'okpuru ibu zuru oke ihe karịrị otu nkeji oge niile.
5. Agaferela ibu ibu ibu winch. Mgbe moto na -ekpo ọkụ, biko kwụsịtụ ka ị daa jụụ.
A na -ekwe nkwa ngwaahịa a maka ọnwa 24 megide ihe adịghị mma na ịrụ ọrụ. Mkpuchi ahụ na -ewepu ụdọ waya, mmebi nke eji eme ihe n'ụzọ na -adịghị mma, ịghara ịgbaso ntuziaka, ma ọ bụ mikpu n'ime mmiri.
Mmeri a nwere moto ọnya na -egbochi mmiri 6.5 hp. A na-ejikọ ya na ụgbọ ala ụgbọ ala nke nwere ọkwa 3 nke na-eme ngwa ngwa, na-edozi mbenata ibu nke ọma yana nwee esemokwu na-adịchaghị mma na eserese parasitic.
USB siri ike
Dị ka ọtụtụ winches, nke a na -arụ ọrụ n'okpuru mkpọchi spool efu mgbe ọ bụla ịchọrọ ịdọpụta ahịrị. A na -eme eriri ya 92 ft site na waya siri ike ma sie ike nke siri ike imebi.
Foto ndị n'ezie
Nke gara aga: Ihe mkpuchi eletrik DHS
Osote: Ụgbọ ala pallet nwere akpịrịkpa
Chain ndoli Trolley
Igwe ọkụ eletrik Trolley
Ntuziaka ntuziaka Trolley
Obere ụgbọ elu Trolley
Bannon Electric Hoist, Lever Puller, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Micro Electric eriri eriri, Igwe ọkụ eletrik eletrik,